यी हुन् ७० करोड कमिसन का ण्डका योजनाकार , रातारात अमेरिका फरार – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/यी हुन् ७० करोड कमिसन का ण्डका योजनाकार , रातारात अमेरिका फरार
यी हुन् ७० करोड कमिसन का ण्डका योजनाकार , रातारात अमेरिका फरार
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख विकल पौडेल अमेरिका उडेका छन्। सुरक्षण मुद्रण(सेक्युरिटी प्रेस) खरिद गर्दा कमिसनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कमिसनका लागि गरेको बार्गेनिङको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएकै दिन पौडेल बिहीबार अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन्।
बिहीबार दिउँसो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएर फ्रान्ससँग सेक्युरिटी प्रेस किन्ने सञ्चार मन्त्रालयको निर्णयको बचाउ गरेका पौडेल बेलुका अमेरिका उडेको स्रोतले जानकारी दियो।
मन्त्रिपरिषद्ले पुस ७ गते फ्रान्स वा जमर्नीमध्ये एक देशसँग खरिद गर्न अनुमति दिएपछि केन्द्रको सफिारिससमेतका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले फ्रान्ससँग किन्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्णय लगत्तै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको तथ्य बाहिरएपछि लेखा समितिले सोधपुछ गर्न बिहीबार बोलाएको थियो। समितिमा सांसदको ‘तारो’ बनेका पौडेल बिदा मिलाएर दश दिनका लागि अमेरिका हिँडेका हुन्।
उनले पटकपटक नेपालको आवश्यकताअनुसार फ्रान्ससँग खरिद गर्न लागेको बताएपछि सांसदहरु ‘नेपालको आवश्यकता भनेको के हो?’ उनीसँग जंगिएका थिए। समितिले तत्कालका लागि खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौं । गत पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट सरकारले सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन) खरिद गर्न सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रकृयामार्फत् जाने र त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई रकम निकासा गर्ने निर्णय गर्‍यो। फ्रान्स र जर्मन सरकारबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये उपयुक्त प्रस्तावलाई स्वीकार्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय थियो।
सांसद सूर्य पाठकले ‘तपाईको विज्ञताको प्रमाणपत्र के हो? सरकारले किन्न ल्याएको मेसिनको गुणस्तर के हो र त्यसको बजार मूल्य कति छ? भनेर बुझ्न तपाईलाई समितिमा बोलाएको। हाम्रो छलफलको चु,रो मिलिरहेको छैन। नत्र त जसले जे निवेदन ल्याउँछ र बजारमा जे भन्दै हिड्छ त्यसलाई सोझै समितिमा ल्याएर छलफलको विषय बनाउन हुँदैन,’ भनेपछि अरु सांसदहरुले पनि त्यसैलाई सहमति जनाए।
कपिलवस्तुको मस्जिदबाट नमाज पढ्दै गरेका १४ जना पक्राउ